Nagu saabsan - Shijiazhuang Casiting Trading Co., Ltd.
Tayada Dheemanka Kabaha, Abuur Nolol Qurux Badan!
Shirkadda Shijiazhuang Casiting Trading Company waa alaab -qeybiye xirfad leh oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee shubka. Waxaan soo saari karnaa oo bixin karnaa noocyo kala duwan oo kabka birta ah, tuubbooyin bir/cawl, caag aluminium leh culeys unug alaab laga bilaabo dhowr kiilogaraam ilaa 10000 kiilo.
Warshadeenu waxay dabooshaa aag ka badan 50000 mitir murabac, iyo guud ahaan awoodda wax -soo -saarka ee kabka kala duwan ayaa ka badan 30,000 tan/sanad, Waa shirkad hormuud u ah soo saarista qalabka macdanta dhuxusha ee Shiinaha. Waxaan leenahay wadar ka badan500 shaqaalaha oo ay ku jiraan injineer kabka kala duwan, farsamo yaqaanno, shaqaale farsamo oo sare oo xirfad leh, shaqaalaha maamulka. Waxaan leenahay laba khad oo wax -ku -beddel otomaatig ah: mid waa khadka wax -soo -saarka VRH, mid kalena waa xarriiqa wax -soo -saarka ciidda. Habka shubistu wuxuu qaataa nidaamka software jilidda kombiyuutarka, kaas oo u simi kara habka kabka si dhaqso leh, sax ah oo la fahmi karo. Qalabka dhalaalaya waxaa ka mid ah foornada arc korontada, foornada soo noqnoqda ee dhexe iyo foornada sifeynta LF. Qalabka daaweynta kuleylka waxaa ka mid ah foornada iska caabinta miiska iyo foornada gaaska, kuwaas oo dhammaantood lagu xakameeyo barnaamij otomaatig ah. Waxaan sidoo kale luminay qalabkii lagu shubi lahaa xumbo iyo a205Kg tuur bir bir foornada imtixaanka wax cusub, kaas oo xaqiijin kara imtixaanka si wax soo saarka ballaaran ee castings qalabka kala duwan.
Warshadeenu waxay leedahay qalab kormeer oo dhammaystiran oo iskiis u jira. Kormeerka goobta waxaa lagu qalabeeyay faaruq si toos ah u akhrinaya falanqeeyaha dabka sii-deynta, kormeeraha cabbiraadda saddex-isku-duwaha, aaladda qoyan ee birlabka weyn ee qoyan, dareeraha cilladda ultrasonic, iyo midab-ka-dhex-gala dareeraha cilladda. Iyada oo leh shaybaar ciid ah oo si buuxda u muuqda iyo xarun imtixaan, waxaan ku gaari karnaa xakamaynta tayada adag ee dhammaan dhinacyada laga soo bilaabo alaabta ceeriin, geeddi-socodka wax soo saarka ilaa badeecadaha kama dambaysta ah.
Waxaa horseeday fikradda alaabada cagaaran iyo kuwa nadiifta ah sida jihada horumarinta warshadeena, waxaan dhidibnay nidaam tayo sare leh, tayo sare leh, isticmaalkiisu hooseeyo, nadiif ah, dabacsan oo dabacsan, annagoo adeegsanayna qalabka wax lagu shubay oo si fudud loo cusboonaysiin karo oo dib loo isticmaali karo iyo hababka kabka. Nidaamka ka saarista boodhka ee soo noqnoqoshada soo noqnoqda ee horumarsan wuxuu ilaaliyaa caafimaadka warshadaha macdanta wuxuuna si weyn u yareeyaa wasakheynta kabka ee deegaanka. Warshadeenu waa mid gudaha ah "shirkad shubis cagaaran oo bay'ad ahaan u wanaagsan jawi-saaxiibtinimo" iyo "Mudaaharaad Mudaaharaad Cagaaran oo Shiinaha ah" oo ay u qoondeeyeen Ururka Aasaaska Shiinaha.
Alaabooyinkayaga kala duwan ee shubka ayaa loo dhoofiyay dalal iyo gobollo badan oo adduunka ah sida Mareykanka, Ingiriiska, Vietnam, Bangladesh, Australia, Turkey iyo wixii la mid ah.
Waxaan sugeynaa inaan iskaashi la yeelano macaamiisha cusub iyo kuwii hore si aan u helno xaalad guuleysata!